UKWENZELA NTONI ? - www.yomelijah.com
Eyona menyu (ngesiNgesi)
Kiswahili Afrikaans አማርኛ Hausa Igbo Malagasy Soomaali Yoruba Zulu
Cofa kwikhonkco ukujonga umboniso wevidiyo kwinqaku kwi-twitter, ukuba uneakhawunti
Kutheni le nto uThixo evumele ukubandezeleka nobungendawo ukuza kuthi ga kulo mhla?
"Yhini Yehova, kuza kude kube nini ndikhalela uncedo ungandiva? Kuza kude kube nini ndicela uncedo kubundlobongela, kodwa ungandisindisi? Kutheni undenza ndibone ububi, Yaye kutheni unyamezela ingcinezelo? Kutheni kukho intlekele nobundlobongela phambi kwam? Ibe kutheni ukuxabana nomlo kusanda? Akukho mntu uthobela umthetho, Nobulungisa abenziwa, Kuba abenzi-bubi bajikeleze amalungisa, Yiyo loo nto ubulungisa bugqwethiwe"
"Ndaphinda ndaqwalasela yonke ingcinezelo ekhoyo phantsi kwelanga. Ndazibona iinyembezi zabo bacinezelwayo, yaye kwakungekho mntu ubathuthuzelayo. Abantu ababacinezelayo babenamandla, kungekho mntu ubathuthuzelayo. (...) Akukho nto ndingayibonanga kobu bomi bam bulilize, ukususela kwilungisa elifela kobo bulungisa balo ukuya kumenzi-bubi ophila ixesha elide nangona esenza izinto ezimbi. (...) Yonke le nto ndiyibonile, ndaza ndanikela intliziyo yam kwinto yonke eyenziwa phantsi kwelanga; ngalo lonke ixesha umntu elawulwa ngomnye, uyenzakala. (...) Kukho into elilize eyenzekayo emhlabeni: Kukho amalungisa aphathwa ngathi enze izinto ezimbi, kubekho nabenzi-bubi abaphathwa ngathi bangamalungisa. Mna ndithi kwanale ililize. (...) Ndibone izicaka zikhwele amahashe kodwa iinkosana zihamba ngeenyawo okwezicaka"
(INtshumayeli 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)
"Kuba indalo yenziwa yaphila ubomi obungenanjongo. Ayizange izikhethele obo bomi kodwa yaba yinjongo kaThixo ukuba ayiyeke iphile ubomi obungenanjongo, ngethemba"
"Makungabikho nabani na, xa esesilingweni othi: “Ndilingwa nguThixo.” Kuba uThixo akanakulingwa ngezinto ezimbi, ibe naye akalingi mntu"
Oyena nobangela kule meko nguSathana uMtyholi, ekubhekiselwa kuye eBhayibhileni njengommangaleli (IsiTyhilelo 12:9). UYesu Krestu, uNyana kaThixo, wathi uMtyholi ulixoki kwaye ungumbulali wabantu (Yohane 8:44). Zimbini ezona zityholo:
1 - Umbuzo wolawulo lukaThixo.
2 - Umbuzo wengqibelelo yomntu.
Xa kukho izityholo ezinzulu, kuthatha ixesha elide ukuya kwisigwebo sokugqibela. Isiprofeto sikaDaniel isahluko 7, sibonisa imeko kwinkundla yamatyala, ekubandakanyeka kuyo ulawulo lukaThixo, apho kugwetywa khona: "Phambi kwakhe kwakuphuma umsinga womlilo. Kwakukho amawaka aliwaka awayelungiselela phambi kwakhe, neshumi lamawaka eliphindwe ngeshumi lamawaka elalimi phambi kwakhe. Yahlala phantsi iNkundla, kwavulwa iincwadi. (...) Kodwa iNkundla yahlala phantsi, yamoxutha ulawulo, ukuze acinywe igama, atshatyalaliswe ngokupheleleyo” (Daniyeli 7:10,26). Njengoko kubhaliwe kule ndima, ulawulo lomhlaba lususiwe kuSathana nakumntu. Lo mfanekiso wenkundla uchazwe ku-Isaya isahluko 43, apho kubhalwe khona ukuba abo bathobela uThixo, "ngamangqina" akhe: “Ningamangqina am,” utsho uYehova, “Ningumkhonzi wam endimkhethileyo, Ukuze nindazi futhi nindithembe, Kuba ndisengulowaa. Ngaphambi kwam akuzange kwenziwe Thixo, Kwaye akubangakho namnye nasemva kwam. Mna, mna kanye, ndinguYehova, ibe akukho kwamsindisi ngaphandle kwam” (Isaya 43:10,11). UYesu Krestu ukwabizwa ngokuba "lingqina elithembekileyo" likaThixo (IsiTyhilelo 1:5).
Ngokunxulumene nezi zityholo zibini, uYehova uThixo uvumele uSathana kunye noluntu ixesha, ngaphezulu kweminyaka engama-6,000, ukuba babonise ubungqina babo, bokuba ingaba bangalawula umhlaba ngaphandle kolongamo lukaThixo. Sisekupheleni kwala mava apho ubuxoki bukaMtyholi butyhilwa yimeko yentlekele apho uluntu luzifumana lukhona, kumngcipheko wentshabalalo epheleleyo (Mateyu 24:22). Umgwebo nentshabalalo ziya kwenzeka kwimbandezelo enkulu (Mateyu 24:21; 25: 31-46). Ngoku ke makhe siqwalasele ngokuthe ngqo izityholo ezibini zikaMtyholi, kwiGenesis isahluko 2 no-3, nakwincwadi kaJobhi isahluko 1 no-2.
1 - Umbuzo wolawulo lukaThixo
IGenesis isahluko 2 isixelela ukuba uThixo wadala umntu wambeka "kumyezo" wase-Eden. UAdam wayekwimeko ezifanelekileyo kwaye wayenandipha inkululeko enkulu (Yohane 8:32). Nangona kunjalo, uThixo wabeka umda kule nkululeko: umthi: "UYehova uThixo wamthatha umntu wambeka emyezweni wase-Eden ukuze awulime, aze awunyamekele. UYehova uThixo wamnika lo myalelo umntu: “Kuyo yonke imithi yomyezo ungatya wanele. Kodwa wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungatyi kuwo, kuba mhla uthe watya kuwo, ngokuqinisekileyo uza kufa”” (Genesis 2:15-17). "Umthi wokwazi okulungileyo nokubi" yayiyimbonakalo yekhonkrithi yento elungileyo nembi. Ngoku lo mthi wokwenyani, umda wekhonkrithi, "(ikhonkrithi) ulwazi lokulungileyo nokubi". Ngoku uThixo wabeka umda phakathi "kokulungileyo" nokumthobela kunye "nokubi", ukungathobeli.
Kucacile ukuba lo mthetho kaThixo wawungekho nzima (thelekisa noMateyu 11:28-30 "Kuba idyokhwe yam imnandi nomthwalo wam ulula" kunye no-1 Yohane 5:3 "ayinzima imiyalelo yakhe" (ekaThixo)). Ngendlela, abanye bathi "isiqhamo esalelweyo" simele iintlobano zesini: akulunganga, kuba xa uThixo wayenika lo myalelo, uEva wayengekho. UThixo wayengazukuthetha into u-Adam angakwaziyo (Thelekisa ukulandelelana kweziganeko iGenesis 2:15-17 (umyalelo kaThixo) kunye no-2:18-25 (ukudalwa kuka-Eva)).
"Inyoka yaba yeyona ilumkileyo kunazo zonke izilwanyana zasendle awayezenzile uYehova uThixo. Yathi kumfazi: “Ngaba utshilo nyhani uThixo ukuba nize ningatyi kuyo yonke imithi yomyezo?” Yena umfazi wathi kwinyoka: “Singazitya iziqhamo zemithi yomyezo. Kodwa uThixo uthe ngeziqhamo zomthi osemyezweni phakathi: ‘Nimele ningazityi, ningazichukumisi; kungenjalo niza kufa.’ ” Yona inyoka yathi kumfazi: “Ngokuqinisekileyo anizukufa. UThixo uyazi ukuba mhla nithe natya kuzo, aza kuvuleka amehlo enu nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.” Ngenxa yoko umfazi wabona ukuba umthi wawulungele ukutyiwa, uyinto nje enqwenelekayo emehlweni, unqweneleka ngokuwujonga nje. Ngoko wakha isiqhamo sawo waza watya. Emva koko wanika nendoda yakhe xa yayikunye naye, yaza nayo yatya" (Genesis 3:1-6).
Kwakutheni ukuze uSathana athethe noEva kunoAdam? Kubhaliwe kwathiwa: "Kwakhona, ayingoAdam owaqhathwayo, ­kodwa ngumfazi owaqhathwa ­ngokupheleleyo waza wona" (1 Timoti 2:14). Kwakutheni Ukuze UEva Akhohliswe? Ngenxa yobutsha bakhe, ngelixa uAdam wayeneminyaka engaphezulu kwamashumi amane ubuncinci. Ke ngoko uSathana wasebenzisa ithuba lokungabi namava kukaEva. Nangona kunjalo, uAdam wayeyazi into ayenzayo, wenza isigqibo sokona ngabom. Esi simangalo sokuqala sikaMtyholi, yayikukuhlaselwa kolawulo lukaThixo (IsiTyhilelo 4:11).
Umgwebo nesithembiso sikaThixo
Kungekudala phambi kokuphela kolo suku, ngaphambi kokutshona kwelanga, uThixo wawisa isigwebo sakhe (iGenesis 3: 8-19). Ngaphambi komgwebo, uYehova uThixo wabuza umbuzo. Nantsi impendulo: "Indoda yathi: “Umfazi ondinike yena, undinike isiqhamo somthi ndaza ke nam ndatya.” Emva koko uYehova uThixo wathi kumfazi: “Yintoni le uyenzileyo?” Umfazi waphendula wathi: “Inyoka indiqhathile, ndaza ndatya”" (IGenesis 3:12,13). UAdam noEva abakhange balivume ityala labo, bazama ukuzithethelela. KwiGenesis 3:14-19 singafunda isigwebo sikaThixo kunye nesithembiso sokufezekiswa kwenjongo yakhe: "Ndiza kubeka ubutshaba phakathi kwakho nomfazi naphakathi kwenzala yakho nenzala yakhe. Yona iza kukutyumza intloko uze wena uyilume esithendeni" (Genesis 3:15). Ngesi sithembiso, uYehova uThixo wathi injongo yakhe iyakuzaliseka, kwaye uSathana uMtyholi uza kutshatyalaliswa. Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, isono sangena emhlabeni, kunye nesiphumo saso esona sikhulu, ukufa: "Isono sangena ngomntu omnye ehlabathini, nokufa kwangena ngenxa yesono, kwaza ukufa kwasasazeka kubo bonke abantu ngenxa yokuba bonke babenesono" (KwabaseRoma 5:12).
2 - Umbuzo wengqibelelo yomntu
Umtyholi wathi kukho isiphako kwindalo yomntu. Le yityala likaMtyholi ngokuchasene nengqibelelo kaYobhi: "Wathi uYehova kuSathana: “Uvela phi?” USathana wamphendula uYehova wathi: “Bendizula-zula ndisehla ndisenyuka emhlabeni.” UYehova wathi kuSathana: “Umqaphele phofu umkhonzi wam uYobhi? Akukho mntu unjengaye emhlabeni. Uyindoda elungileyo nethembekileyo, eyoyika uThixo nengazenziyo izinto ezimbi.” USathana wathi kuYehova: “Ukuba uYobhi ebengafumani nto, ebeza kumoyika na uThixo? Andithi wena umkhusele+ yena nendlu yakhe nayo yonke into anayo? Kaloku uwusikelele umsebenzi wezandla zakhe, nemfuyo yakhe igcwele ilizwe lonke. Khawolule nje isandla sakho, uthathe yonke into anayo, ubone ukuba akazukujika akuthuke na.” Ngoko uYehova wathi kuSathana: “Jonga! Yonke into anayo isesandleni sakho. Kodwa ungakhe ulinge umchukumise yena!” Emva koko uSathana wemka phambi kukaYehova. (…) Wathi uYehova kuSathana: “Uvela phi?” USathana wamphendula uYehova wathi: “Bendizula-zula ndisehla ndisenyuka emhlabeni.” UYehova wathi kuSathana: “Umqaphele phofu umkhonzi wam uYobhi? Akukho mntu unjengaye emhlabeni. Uyindoda elungileyo nethembekileyo, eyoyika uThixo nengazenziyo izinto ezimbi. Nangoku akakasoleki nganto, nangona wena ufuna ndimtshabalalise engenzanga nto.” Kodwa uSathana wamphendula uYehova wathi: “Isikhumba ngesikhumba. Akukho nto umntu angenakuyincama ukuze asindise ubomi bakhe. Khawolule nje isandla sakho, umbethe emathanjeni nasenyameni, uze ubone ukuba akazukujika akuthuke na.” UYehova wathi kuSathana: “Jonga ke, ndimyekela esandleni sakho! Kodwa ungakhe ulinge umbulale!”" (UYobhi 1:7-12; 2:2-6).
Isiphoso somntu, ngokukaSathana umtyholi, kukuba ukhonza uThixo, kungengakuba emthanda, kodwa ngenxa yokuzingca nokufuna amathuba. Phantsi koxinzelelo, ngokulahleka kwezinto zakhe kunye noloyiko lokufa, nangokukaSathana umtyholi, umntu akanakuhlala ethembekile kuThixo. Kodwa uYobhi wabonisa ukuba uSathana ulixoki: uYobhi waphulukana nazo zonke izinto zakhe, waphulukana nabantwana bakhe abali-10, kwaye waphantse wasweleka ngenxa yokugula (Yobhi 1 no-2). Abahlobo abathathu bobuxoki batyhola uYobhi ngokwasengqondweni, besithi onke amashwa akhe avela kwizono ezifihliweyo, kwaye ke ngoko uThixo wayesohlwaya uYobhi ngenxa yobutyala bakhe nobungendawo. Kambe ke uYobi zange ayilahle ingqibelelo yakhe, waphendula wathi: “Andisoze ndithi nina ningamalungisa! Andizukuyeka ukuba msulwa de ndife!” (Yobhi 27:5).
Kodwa ke, okona ukusilela kubalulekileyo kukaMtyholi malunga nokunyaniseka komntu, yayiluloyiso lukaYesu Krestu owathobela uThixo kwada kwasekufeni: "Ngaphezu koko, xa wayengumntu, wazithoba wade wafa, efela kwisibonda sokungcungcutheka" (Filipi 2:8). Ngokuthembeka kwakhe, uYesu Krestu wanikela kuYise uloyiso oluxabiseke kakhulu, yiyo loo nto wavuzwa: "Ngenxa yaloo nto, uThixo wamphakamisa wambeka kwisikhundla esiphezulu waza ngobubele wamnika igama elingaphezu kwawo onke amanye amagama, ukuze bonke abantu baguqe egameni likaYesu, abo basezulwini, abo basemhlabeni nabo baphantsi komhlaba, zize zonke iilwimi zivume ekuhleni ukuba uYesu Kristu uyiNkosi, nto leyo eyenza kuzukiswe uThixo uTata” (Filipi 2:9-11).
Kumzekeliso wonyana wolahleko, uYesu Krestu usinika ukuqonda okungcono kwendlela uYise enza ngayo xa igunya likaThixo libuzwa okwethutyana (uLuka 15:11-24). Unyana wabuza uyise ilifa lakhe kwaye waphuma kuloo ndlu. Utata uvumele unyana wakhe osele ekhulile ukuba enze esi sigqibo, kodwa nokuba athwale iziphumo. Kwangokunjalo, no-Adam wasebenzisa inkululeko yokuzikhethela, kodwa naye wehlelwa ziziphumo. Oko kusizisa kumbuzo olandelayo malunga nokubandezeleka koluntu.
Ukubandezeleka sisiphumo sezinto ezine eziphambili
1 - uMtyholi ngulo ubangela ukubandezeleka (kodwa hayi rhoqo) (Yobhi 1:7-12; 2:1-6). NgokukaYesu Krestu, uSathana ngumlawuli weli hlabathi: "Ngoku uThixo uyaligweba eli hlabathi; ibe umlawuli weli hlabathi uza kugxothwa" (Yohane 12:31; 1 Yohane 5:19). Yiyo loo nto uluntu luphela lungonwabanga: "Kuba siyazi ukuba yonke indalo iyancwina yaye isentlungwini de kube ngoku" (Roma 8:22).
2 - Ukubandezeleka sisiphumo semeko yethu yomoni, esikhokelela ekwaluphaleni, ekuguleni nasekufeni: "Isono sangena ngomntu omnye ehlabathini, nokufa kwangena ngenxa yesono, kwaza ukufa kwasasazeka kubo bonke abantu ngenxa yokuba bonke babenesono. (…) Kuba umvuzo ohlawulwa sisono kukufa” (Roma 5:12; 6:23).
3 - Ukubandezeleka kunokuba sisiphumo sezigqibo ezimbi (kwicala lethu okanye elezabanye abantu): "Kuba andizenzi izinto ezilungileyo endifuna ukuzenza, kodwa ndenza izinto ezimbi endingafuniyo ukuzenza" (Duteronomi 32: 5; KwabaseRoma 7:19). Ukubandezeleka ayisosiphumo "somthetho we karma". Nantsi into esinokuyifunda kuYohane isahluko 9: "Xa uYesu wayegqitha ngendlela, wabona umntu owazalwa engaboni. Abafundi bakhe bambuza bathi: “Mfundisi, lo mntu wazalwa engaboni kuba kona yena na okanye abazali bakhe?” UYesu waphendula wathi: “Lo mntu akonanga, nabazali bakhe abonanga, kodwa ukungaboni kwakhe kuvule ithuba lokuba imisebenzi kaThixo ibonakale ngaye" (Yohane 9:1-3). "Imisebenzi kaThixo", kwimeko yakhe, ingangummangaliso ukuphilisa indoda eyimfama.
4 - Ukubandezeleka kunokuba sisiphumo "amaxesha angalindelekanga kunye neziganeko", ezibangela ukuba umntu abe kwindawo engalunganga ngexesha elingalunganga: "Enye into endiyibonileyo phantsi kwelanga kukuba, iimbaleki ezinamendu azisoloko ziphumelela elugqatsweni, namakroti awasoloko ephumelela emfazweni, nezilumko azisoloko zinokutya, neengqondi azisoloko zinobutyebi, neengcaphephe azisoloko ziphumelela, kuba bonke behlelwa lixesha naziziganeko ezingalindelekanga. Kuba umntu akalazi ixesha lakhe. Kanye njengeentlanzi ezibanjiswa ngomnatha obulalayo, neentaka ezibanjiswa ngesibatha, banjalo ukurhintyelwa kwabo oonyana babantu ngexesha lentlekele, xa libaqubula bengalindelanga" (INtshumayeli 9:11,12).
Nantsi into eyathethwa nguYesu Krestu malunga neziganeko ezibini ezibi ezabulala abantu abaninzi: "Ngelo xesha abanye ababelapho baxelela uYesu ukuba uPilato wabulala amanye amaGalili awayezokunikela imibingelelo. Wabaphendula wathi: “Nicinga ukuba la maGalili abulawa kuba ayengaboni ngaphezu kwamanye amaGalili? Akazange abulawe ngenxa yaloo nto, ngoko nani niza kufa ukuba aniguquki. Okanye nicinga ukuba aba bantu bayi-18 bawelwa yinqaba yaseSilowam baza bafa, babengaboni ngaphezu kwabanye abantu baseYerusalem? Abazange bafe ngenxa yaloo nto, ngoko nani niza kufa ukuba aniguquki”" (Luka 13:1-5). Akuzange nanini na uYesu Kristu acebise ukuba abantu abangamaxhoba eengozi okanye eentlekele zemvelo ngewone ngaphezu kwabanye. Akunjalo uThixo ubange iziganeko ezinjalo, ukohlwaya aboni.
UThixo uya kuphelisa konke oku kubandezeleka: "Ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Jonga! Intente kaThixo iphakathi kwabantu. Uza kuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yaye uThixo uza kuba kunye nabo. Uza kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu. Izinto zangaphambili azisekho”” (Isityhilelo 21:3,4).
Asicwangciswanga ukwenza okuhle okanye okubi, kodwa ngokwe sikhetha ukwenza okuhle okanye okubi (iDuteronomi 30:15). Le mbono ngekamva inxulumene ngokusondeleyo nembono abantu abaninzi abanayo kumandla kaThixo okwazi ikamva. Siza kubona indlela uThixo awasebenzisa ngayo amandla akhe okwazi ikamva. Siza kubona kwibhayibhile ukuba uThixo uyisebenzisa ngendlela ekhethiweyo okanye ngenjongo ethile, ngemizekelo emininzi yebhayibhile.
UThixo usebenzisa amandla akhe okwazi ikamva, ngendlela ekhethiweyo kunye nokukhetha
Ngaba uThixo wayesazi ukuba uAdam wayeza kona? Ukusuka kwimeko yeGenesis 2 ne-3, hayi. UThixo akaniki myalelo, esazi kwangaphambili ukuba awuzukuthobela. Oku kuchasene nothando lwakhe kwaye lo myalelo kaThixo wawungekho nzima (1 Yohane 4:8; 5:3). Nayi imizekelo emibini yebhayibhile ebonisa ukuba uThixo usebenzisa amandla akhe okwazi ikamva ngendlela ekhethiweyo nengakhethiyo. Uhlala esebenzisa obu mandla ngenjongo ethile.
Thatha umzekelo ka-Abraham. KwiGenesis 22:1-14, uThixo ucela uAbraham ukuba abingelele ngonyana wakhe uIsake. Ngaba uThixo wayesazi kwangaphambili ukuba uAbraham wayeza kuthobela? Ukusuka kwimeko yeGenesis 22, hayi. Okokugqibela uThixo wathi ku-Abraham: "Emva koko yathi: “Ungayenzakalisi loo nkwenkwe, ungayenzi nto tu, kuba ngoku ndiyazi ukuba uyamoyika uThixo, kuba khange wale nonyana wakho kum, nangona inguye yedwa”” (IGenesis 22:12). Kubhaliwe "ngoku ndiyazi ukuba uyamoyika uThixo". Ibinzana elithi "ngoku" libonisa ukuba uThixo wayengazi nokuba u-Abraham uyakusithobela na esi sicelo kude kube sekupheleni.
Umzekelo wesibini uphathelele ukutshatyalaliswa kweSodom neGomora. Into yokuba uThixo athumele iingelosi ezimbini ukuba zibone imeko embi ibonisa kwakhona ukuba ekuqaleni wayengenabo bonke ubungqina bokwenza isigqibo, kwaye kule meko wasebenzisa amandla akhe okwazi esebenzisa iingelosi ezimbini (iGenesis 18: 20,21).
Ukuba sifunda iincwadi ezahlukeneyo zesiprofeto zebhayibhile, siya kufumanisa ukuba uThixo usasebenzisa amandla akhe okwazi ikamva, ngenjongo ethile. Umzekelo, ngexa uRebecca wayekhulelwe amawele, ingxaki yayikukuba yeyiphi kwaba bantwana babini eya kuba ngukhokho wesizwe esikhethwe nguThixo (iGenesis 25:21-26). UYehova uThixo wenza uluvo lokujonga ngoEsawu ukujonga kwemfuza (Nokuba ayisiyoyemfuza elawula ngokupheleleyo isimilo esizayo), emva koko uThixo wabona ukuba bangamadoda anjani: "Amehlo akho andibona ndiseyimbumba; Encwadini yakho, kwabhalwa ngeentsuku ezaziza kubunjwa ngazo Zonke iinxalenye zam, Kungekabikho nanye kuzo” (IiNdumiso 139:16). Ngokusekwe kolu lwazi, uThixo wakhetha (KwabaseRoma 9:10-13; kwiZenzo 1:24-26 "Wena, Yehova, ozazi iintliziyo zabo bonke").
Ngaba UThixo Uyasikhusela?
Ngaphambi kokuqonda ukucinga kukaThixo malunga nomba wokhuseleko lwethu, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo amanqaku amathathu abalulekileyo ebhayibhileni (1 Korinte 2:16):
1 - UYesu Krestu wabonisa ukuba obu bomi buphela ngokufa, bunethuba lethutyana labo bonke abantu (Yohane 11:11 (Ukufa kukaLazaro kuchazwa njengo "kulala"). Ukongeza, uYesu Krestu wabonisa ukuba okubalulekileyo lithemba lobomi obungunaphakade (Matewu 10:39). Umpostile uPaulos wabonisa ukuba "ubomi benene" bumathemba obomi obungunaphakade (1 kuTimoti 6:19).
Xa sifunda incwadi yeZenzo, sifumanisa ukuba ngamanye amaxesha uThixo akamkhuseli ekufeni umkhonzi wakhe, kwimeko ka-Yakobi no-Stefano (Zenzo 7:54-60; 12:2). Ngamanye amaxesha, uThixo wagqiba kwelokuba amkhusele umkhonzi wakhe. Umzekelo, emva kokubhubha kompostile uYakobi, uThixo wagqiba ekubeni amkhusele umpostile uPetros ekufeni okufanayo (Izenzo 12:6-11). Ngokubanzi, kwimeko yebhayibhile, ukukhuselwa komkhonzi kaThixo kuhlala kunxulunyaniswa nenjongo yakhe. Umzekelo, ukhuseleko kompostile uPawulos lwalunenjongo ephezulu: wayeza kushumayela kookumkani (Izenzo 27:23,24; 9:15,16).
2 - Lo mbuzo wokhuseleko lukaThixo kufuneka ubekwe kwimeko yemiceli mngeni emibini kaSathana, ngakumbi kumagama ngoYobhi: "Andithi wena umkhusele yena nendlu yakhe nayo yonke into anayo? Kaloku uwusikelele umsebenzi wezandla zakhe,+ nemfuyo yakhe igcwele ilizwe lonke" (Yobhi 1:10). Ukuphendula umbuzo wentembeko, uThixo uthathe isigqibo sokususa ukhuseleko kuYobhi, kodwa nakulo lonke uluntu. Ngaphambi nje kokuba asweleke, uYesu Krestu, ecaphula kwiNdumiso 22:1, wabonisa ukuba uThixo ulususile kuye lonke ukhuselo, olukhokelele ekufeni kwakhe abe lidini (Yohane 3:16; Mateyu 27:46). Nangona kunjalo, ngokubhekisele kubuntu ngokubanzi, oku kungabikho kokhuseleko lukaThixo akuphelelanga, kuba kanye njengokuba uThixo wamthintelayo umtyholi ukubulala uYobhi, kuyacaca ukuba kuyafana kulo lonke uluntu (thelekisa noMateyu 24:22).
3 - Sibonile ngentla ukuba ukubandezeleka kunokubangelwa "ngamaxesha angalindelekanga kunye neziganeko" ezibangela ukuba abantu baphele ngexesha elingalunganga, kwindawo engeyiyo (INtshumayeli 9: 11,12). Ke, abantu ngokubanzi abakhuselekanga kwimiphumo yokhetho olwenziwa nguAdam ekuqaleni. Umntu uyaguga, agule, afe (KwabaseRoma 5:12). Unokuba lixhoba leengozi okanye iintlekele zendalo (KwabaseRoma 8:20; incwadi yeNtshumayeli inenkcazo eneenkcukacha kakhulu ngamampunge obu bomi akhokelela ekufeni: “Elona lize!” utsho umhlanganisi, “Elona lize! Yonke into ililize!” (INtshumayeli 1:2)).
Ngaphezu koko, uThixo akabakhuseli abantu kwiziphumo zezigqibo zabo ezimbi: "Ningalahlekiswa: UThixo akayonto yokuhlekisa. Loo nto ayityalayo umntu, uza kuvuna kwayona; kuba otyala iminqweno yomzimba onesono uza kuvuna izinto ezimbi ezibangelwe yiloo minqweno, kodwa umntu owenza izinto ekhokelwa ngumoya kaThixo, uza kuvuna ubomi obungunaphakade ngenxa yomoya kaThixo" (Galati 6:7,8). Ukuba uThixo ulushiye uluntu lulilize ixesha elide, kusivumela ukuba siqonde ukuba ulurhoxisile ukhuseleko lwakhe kwimiphumo yesimo sethu sesono. Ngokuqinisekileyo, le meko inobungozi kuluntu lonke iya kuba yeyethutyana (Roma 8:21). Emva kokuba isityholo sikaMtyholi sisonjululwe, uluntu luyakufumana kwakhona ukhuseleko oluhle lukaThixo emhlabeni (Ndumiso 91:10-12).
Ngaba oku kuthetha ukuba okwangoku asisakhuselwanga nguThixo? Inkuselo esiyinikwa nguThixo yile yekamva lethu elingunaphakade, ngokwethemba lobomi obungunaphakade, ukuba siyanyamezela kude kube sekupheleni (Mateyu 24:13; Yohane 5:28,29; Izenzo 24:15; Isityhilelo 7:9-17). Ukongeza, uYesu Krestu kwinkcazo yakhe yomqondiso wemihla yokugqibela (uMateyu 24, 25, uMarko 13 noLuka 21), kunye nencwadi yeSityhilelo (ngakumbi kwisahluko 6:1-8 no-12:12), bonisa oko Uluntu luza kuba namashwa amabi ukusukela ngo-1914, nto leyo icacisa gca ukuba okwexeshana uThixo ebengayi kuyikhusela. Nangona kunjalo, uThixo wenze ukuba sikwazi ukuzikhusela thina ngabanye ngokusebenzisa isikhokelo saKhe esilungileyo esifumaneka eBhayibhileni, iLizwi laKhe. Ukuthetha ngokubanzi, ukusebenzisa imigaqo-siseko yeBhayibhile kuyanceda ukuphepha iingozi ezingeyomfuneko ezinokubufinyeza ubomi bethu ngokungafanelekanga (IMizekeliso 3:1,2). Ke ngoko, ukusetyenziswa kwemigaqo yebhayibhile, ingcebiso kaThixo, siyakuba njengokujonga ngononophelo ngasekunene nangasekhohlo ngaphambi kokuwela isitalato, ukuze sisindise ubomi bethu (Imizekeliso 27:12).
Ukongeza, umpostile uPetros wagxininisa kwimfuneko yomthandazo: "Kodwa isiphelo sayo yonke into sisondele. Ngoko ke yibani ngabaphilileyo engqondweni, nihlale nikulungele ukuthandaza" (1 Petros 4:7). Umthandazo kunye nokucamngca kunokukhusela uzinzo lwethu ngokwasemoyeni nasengqondweni (KwabaseFilipi 4:6,7; kwiGenesis 24:63). Abanye bakholelwa ukuba bakhuselwe nguThixo ngaxa lithile ebomini babo. Akukho nto ebhayibhileni ethintela le meko ikhethekileyo ukuba ingabonwa, okuphikisanayo: "kwaye ndiza kukholiswa ngulowo ndikholiswayo nguye, ndibe nenceba kulowo ndiza kumenzela inceba" (IEksodus 33:19). Kuphakathi kukaThixo nalo mntu ngewayekhuselwe. Akufuneki sigwebe: "Ucinga ukuba ungubani le nto ude ugwebe isicaka somnye umntu? Ukuma okanye ukuwa kwaso kuxhomekeke enkosini yaso. Nyhani ke, siza kwenziwa sime, kuba uYehova* uyakwazi ukusenza sime" (KwabaseRoma 14:4).
Ulwalamano lobuzalwana kwaye nincedane
Phambi kokuba ukubandezeleka kuphele, kufuneka sithandane kwaye sincedane, ukuze sinciphise ukubandezeleka okusingqongileyo: "Ndininika umyalelo omtsha, wokuba nithandane. Nimele nithandane ngale ndlela nam ndinithande ngayo. Bonke baza kutsho bazi ukuba ningabafundi bam, ukuba niyathandana” (Yohane 13:34,35). Umfundi uYakobi, wabhala kakuhle ukuba olu hlobo lothando kufuneka luboniswe ngezenzo ukunceda abamelwane bethu abasengxakini (Yakobi 2:15,16). UYesu Krestu wathi ukunceda abo bangasoze bayibuyisele kuthi (Luka 14:13,14). Ngokwenza oku, ngandlela thile, "siboleka" uYehova kwaye uyakuyibuyisela kuthi... kalikhulu (IMizekeliso 19:17).
Kunika umdla ukufunda oko kuchazwa nguYesu Krestu njengezenzo zenceba eziya kusenza sikwazi ukufumana ubomi obungunaphakade: "Kuba nandinika into yokutya xa ndandilambile; nandinika nento yokusela xa ndandinxaniwe. Nandamkela xa ndandingowasemzini; nandinika impahla xa ndandihamba ze. Nandihoya xa ndandigula. Nazokundibona xa ndandivalelwe ejele’" (Mateyu 25:31-46). Kufuneka iqatshelwe into yokuba kuzo zonke ezi zenzo akukho senzo sinokuthathwa "njengenkolo". Ngoba ? Rhoqo, uYesu Krestu waphinda le ngcebiso: "Ndifuna inceba, andithandi mbingelelo" (Mateyu 9:13; 12:7). Intsingiselo ngokubanzi yegama "inceba" yimfesane isebenza ngokusebenza (enye intsingiselo luxolelo). Ukubona umntu osweleyo, nokuba siyamazi okanye asimazi, kwaye ukuba siyakwazi ukwenza njalo, siya kumnceda (IMizekeliso 3:27,28).
Umbingelelo umele izenzo zokomoya ezinxulumene ngqo nokunqula uThixo. Ke ngokucacileyo ulwalamano lwethu noThixo lubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, uYesu Krestu wabagweba abanye abantu bexesha lakhe ababesebenzisa ibinzana elithi "ukuzincama", ye ukuze bangancedi abazali babo abalupheleyo. (Mateyu 15:3-9). Kuyathakazelisa ukuqaphela oko kwathethwa nguYesu Krestu malunga nabo bangazukukwenza ukuthanda kukaThixo: "Ngaloo mini, abaninzi baza kuthi kum: ‘Nkosi, Nkosi, asizange siprofete egameni lakho na, sakhupha iidemon egameni lakho, senza nemimangaliso emininzi egameni lakho?’" (Mateyu 7:22). Ukuba sithelekisa uMateyu 7:21-23 kunye no-25:31-46 kunye no-Yohane 13:34,35, siyaqonda ukuba "umbingelelo" nenceba zizinto ezibaluleke kakhulu (1 Yohane 3:17,18; Mateyu 5:7).
UThixo uza kuluphilisa uluntu
Kumbuzo womprofeti uHabhakuki (1:2-4), malunga nokuba kutheni uThixo evumele ukubandezeleka nobubi, nantsi impendulo: "Waza uYehova wandiphendula wathi: “Bhala phantsi lo mbono, uze uwubhale ngokucacileyo emacwecweni, Ukuze umntu owufunda ngokuvakalayo awufunde lula. Kuba umbono uza kwenzeka ngexesha lawo, Yaye ixesha lokwenzeka kwawo liyakhawuleza, ibe uza kwenzeka. Nokuba ubonakala ulibazisa, hlala uwulindele! Kuba uza kwenzeka ngokuqinisekileyo. Awuzukufika emva kwexesha!"" (Habhakuki 2:2,3). Nazi ezinye izicatshulwa zeBhayibhile malunga nalo mbono usondeleyo kakhulu "wethemba" lethemba elingazukufika emva kwexesha:
"Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha, kuba izulu langaphambili nomhlaba zazingasekho, nolwandle lungasekho. Ndabona nesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehombele umyeni wakhe. Ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Jonga! Intente kaThixo iphakathi kwabantu. Uza kuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yaye uThixo uza kuba kunye nabo. Uza kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu. Izinto zangaphambili azisekho”" (IsiTyhilelo 21:1-4).
"Ingcuka iza kukhe ihlale netakane legusha, Ihlosi libuthe netakane lebhokhwe, Kubuthe ndawonye ithole lenkomo nengonyama, nesilwanyana esondlekileyo, zonke zihlale kunye; Zikhokelwe yinkwenkwana. Imazi yenkomo nebhere ziza kutya kunye, Amathole azo alale kunye. Ingonyama iza kudla iindiza njengenkunzi yenkomo. Usana luza kudlala emngxunyeni wephimpi, Nomntwana olunyulweyo abeke isandla sakhe emngxunyeni wenyoka enobuhlungu. Azizukwenzakalisa Zingazukonakalisa kuyo yonke intaba yam engcwele, Kuba umhlaba ngokuqinisekileyo uza kugcwaliswa kukwazi uYehova Njengokuba nolwandle lugcwele ngamanzi” (Isaya 11:6-9).
"Ngelo xesha aza kuvulwa amehlo abantu abangaboniyo, Zivulwe neendlebe zabantu abangevayo. Ngelo xesha umntu oqhwalelayo uza kutsiba njengempunzi, Nolwimi lomntu ongakwaziyo ukuthetha luza kukhwaza ngovuyo. Kuba nentlango iza kumpompoza amanzi, Kubekho imisinga yamanzi entlango. Umhlaba owomiswe bubushushu uza kuba njengechibi elineengcongolo. Nomhlaba ongenamanzi ube njengemithombo yamanzi. Apho kwakudla ngokulala oodyakalashe, Kuza kubakho ingca eluhlaza yaka, iingcongolo nompapiri” (Isaya 35:5-7).
"Apho, soze kuphide kubekho sana luza kufa luneentsuku nje ezimbalwa luzelwe, Kungasoze kubekho nandoda ifa ingayiphilanga yonke imihla yayo. Umntu ofa eneminyaka elikhulu, uza kube esabonwa njengenkwenkwana, Aze umoni aqalekiswe nangona eneminyaka elikhulu. Baza kwakha izindlu, bahlale kuzo, Batyale amasimi eediliya, batye iziqhamo zawo. Abazukwakha kuhlale abanye, Bengazukutyala izinto eziza kutyiwa ngabanye. Kuba imihla yabantu bam iza kuba njengeyomthi, Abantu bam abakhethiweyo baxhamle ngokupheleleyo kwimisebenzi abayenze ngezandla zabo. Abazukubulalekela into engekhoyo, Bengazukuzala abantwana abaza kwehlelwa yintlekele, Kuba bayinzala yabantu abasikelelweyo nguYehova, Bona nenzala yabo. Baza kuthi bengekandibizi, ndibaphendule; Bathi besathetha, ndibe sendivile” (Isaya 65:20-24).
"UYehova wemikhosi uza kudekela izizwana kule ntaba, Izidlo ezinamafutha, Iwayini eninzi emnandi, Izidlo ezinamafutha nomongo, Iwayini emnandi nehluziweyo. Kule ntaba uza kususa isigqubuthelo esogqume zonke izizwana, Nelaphu elithe wambu zonke iintlanga. Uza kukuginya ukufa ngonaphakade, Yaye iNkosi enguMongami uYehova iza kuzosula iinyembezi ebusweni babo bonke abantu. Ukuphathwa kakubi kwabantu uza kukuphelisa emhlabeni wonke, Kuba utsho uYehova” (Isaya 25:6-8).
"Abantu benu abafileyo baza kuphila. Izidumbu zakuthi ziza kuvuka. Vukani nize nikhwaze nivuya, Nina bahlala eluthulini! Kuba umbethe wenu unjengombethe wakusasa, Nomhlaba uza kubavusa abo bangenamandla ekufeni” (Isaya 26:19).
"Abantu abaninzi kwabo bafayo baza kuvuka. Abanye baza kuvuka baze baphile ubomi ngonaphakade. Abanye baza kuvukela kubomi behlazo nakwilishwa likanaphakade" (Daniyeli 12:2).
"Sanukumangaliswa yile nto, kuba kuza ixesha apho bonke abasemangcwabeni beza kuliva ilizwi lakhe, baze bavuke. Abo benza izinto ezilungileyo baza kuvukela ebomini, baze abo benza izinto ezimbi, bavukele ukugwetywa" (Yohane 5:28,29).
Ngubani uSathana uMtyholi?
UYesu Krestu wachaza uMtyholi ngokulula: “Yena wayengumbulali kwasekuqaleni, ibe wayilahla inyani, kuba akananyani. Eyona nto ayaziyo kukuthetha ubuxoki, kuba ulixoki, ibe ubuxoki beza ngaye” (Yohane 8:44). USathana umtyholi akangomqondo wobubi, usisidalwa somoya sokwenene (Jonga iakhawunti kuMateyu 4:1-11). Kwangokunjalo, iidemon ikwayizingelosi ezaba ngabavukeli abalandela umzekelo kaSathana (iGenesis 6:1-3, ukuthelekisa ileta ka-Yuda ivesi 6: "Neengelosi ezingazange ziyigcine eyona ndawo yazo, zalishiya ikhaya lazo, uzigcine zibotshwe ngamatsheyini ngonaphakade endaweni emnyama thsu ukuze zifumane umgwebo wemini enkulu").
Xa kubhaliwe kwathiwa "akemi enyanisweni", kubonisa ukuba uThixo wadala le ngelosi engenasono. Le ngelosi, ekuqaleni kobomi bayo "yayinegama elihle" (INtshumayeli 7:1a). Nangona kunjalo, akazange aqhubeke ethe tye, wahlakulela ikratshi entliziyweni yakhe kwaye ekuhambeni kwexesha waba "ngumtyholi", oko kuthetha ukuba umnyelisi kunye nomchasi; igama lakhe elidala elihle, igama lakhe elihle, lithathelwe indawo lelinye ngentsingiselo yentloni engunaphakade. Kwisiprofeto sikaHezekile (isahluko sama-28), ngokubhekisele kukumkani onekratshi waseTire, kucaciswe gca kwikratshi lengelosi eyaba "nguSathana": "Nyana womntu, culela ukumkani waseTire ingoma yokuzila uze uthi kuye, ‘Ithi iNkosi enguMongami uYehova: “Wawungenasiphako, Unobulumko yaye ugqibelele ngobuhle. Wawuse-Eden, emyezweni kaThixo. Wawuhonjiswe ngawo onke amatye axabisekileyo, Irubhi, itopazi neyaspisi; ikrizolite, ianikis nejeyidi; isafire, itekoyisi ne-emeraldi; Yaye zazibekwe phezu kwegolide. Zalungiswa ngemini owadalwa ngayo. Ndakubeka ukuba ube yikherubhi ekhethiweyo eyolule amaphiko. Wawusentabeni engcwele kaThixo, uhamba-hamba phakathi kwamatye anomlilo. Zonke iindlela zakho zazilungile ukususela kwimini owadalwa ngayo Kwada kwafumaneka ububi kuwe"" (Hezekile 28:12-15). Ngesenzo sakhe sokungabi nabulungisa e-Eden waba "lixoki" elabangela ukufa kwayo yonke inzala ka-Adam (iGenesis 3; KwabaseRoma 5:12). Okwangoku, nguSathana olawula umhlaba: "Ngoku uThixo uyaligweba eli hlabathi; ibe umlawuli weli hlabathi uza kugxothwa" (Yohane 12:31; Kwabase-Efese 2: 2; 1 Yohane 5:19).
USathana uya kutshatyalaliswa ngonaphakade: "Kungekudala uThixo onika uxolo uza kumtyumza uSathana phantsi kweenyawo zenu" (Genesis 3:15; KwabaseRoma 16:20).